Sosialy - Hamafisina ny fiarovana ny zon'ny ankizy
Posted on: November 25, 2019 Written by: Book News Categorized in: Malagasy, Social
Hisy ny fanentanana lehibe hampafantarana ny zon’ny ankizy eny amin’ny Parvis Analakely ny 29 Novambra izao. Hetsika izay hitohy manerana ny Boriboritany 6 eto an-drenivohitra.
Fampahafantarana ny zon’ny ankizy
Mbola maro ireo zavatra miantraika amin’ny ankizy toy ny fanambadiana mialoha, ny tsy fianaran’ny ankizy, indrindra ny ankizy vavy. Ny olana eo amin’ny fanaovam-bakisiny hany ka maro ireo iharan’ny aretina samihafa. Eo ihany koa ny tsy fahazoana sakafo ara-dalàna toa ny nonon-dreny, ny rano…
Noho izany dia napetraka ny fihetsika fototra zay hiantsoroan’ny ankohonana (PFE) mba hahatonga azy ho fototry ny fampandrosoana any aoriana.
Ao anatin’izay fampalalahana sy fampitomboana ny zon’ny ankizy izay dia misy vondrona ahitana ministera 6 miara miasa toy ny ministeran’ny Rano, ministeran’ny Mponina, ministeran’ny Fanabeazana, ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ministeran’ny Atitany, ministeran’ny Fahasalamana, izay miaramiasa amin’ny Unicef.
Eto Antananarivo no hanombohana azy ary hitohy manerana an’i Madagasikara. Hisy araka izany ny hetsika lehibe izay atao ka anisan’izany ny fanentanana miainga amin’ny “Voyage dans la vie de l’enfant”, izay entina hanentanana ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka.
Hatomboka eny amin’ny Parvis Analakely izy io ny faha 29 Novambra izao, ary hitety ny Boroboritany 6 eto an-drenivohitra
Nisy ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, nentina nampahafantatra ny hetsika izay hotanterahina ny 29 novambra izao etsy aminn’y Parvis Analakely.
Fihetsika fototra izay hiantsoroan’ny ankohonana
Misy ny fihetsika fototra 17 izay napetraka ho tanterahina eo anivon’ny ankohonana (FPE) ka 6 no hanombohana azy toa ny fampinonoana ny zaza vao teraka ka hatramin’ny enimbolana, ny fahazoan’ny ankizy sakafo fototra ara-pahasalamana, fanaovana vaksiny, ny fanasana tanana amin’ny savony, ny fanampiana ny ankizy mba ahavita farafahatarany ny CEPE, ny fiarovana ny ankizy amin’ny herisetra ara-nofo sy fanambadiana aloha loatra.
Vondrona maromaro no hanao azy ka tafiditra ao anatin’izany ny Ray aman-drenin’ny ankizy, ny mpampianatra izay tokony hanampy ny ray aman-dreniny amin’ny fampiharana ny zony.
Marihina fa ny famolavolana ny ankizy hatramin’ny fahakeliny dia ahatonga azy ho fototry ny fandrosoan’ny Fiarahamonina.
Tsiahivina fa efa nisy ny fiantsoana ny fikambanana (OSC), ny Ray aman-dreny ara-drazana, ny mpanao gazety handray anjara amin’ny PFE.
Tagged as: fanjakanamalagasy unicef zonnyakizy
Previous post Le Club des entrepreneurs de Med et la JCI Madagascar – Deux organisations unies pour concrétiser une vision commune
Next post Crédit – Les abonnés bancaires malagasy n’auront plus à craindre des créances
0 comments on “Sosialy – Hamafisina ny fiarovana ny zon’ny ankizy” Add yours →